Laptọọpụ Larịị Microsoft nke Windows 10 Nkọwapụta | Ọ BỤ
3 Ka 2017
Laptọọpụ Anya Microsoft bụ ebe a, onye a na-agba ọsọ Windows 10 S. Microsoft kwupụtara New Laptọọpụ Elu na Windows 10 S na Microsoft maka Education oge na New York ụnyaahụ, na ngwaahịa a iji dozie àgwà na-enweghị atụ nke Google Chromebooks na Apple MacBooks na ntụziaka na United States.
Laptọọpụ Larịị ọ bụla dịka ihe dị mkpa, yana dịka Onye Isi Nchịkwa nke Njikwa nke Microsoft Panos Panay mere ka o doo anya n'oge mmeghe, ngwaọrụ a na-ewere Apple MacBooks. Microsoft na-ekwu na Laptọọpụ Larịị dị nro ma dị ọkụ karịa MacBook ọ bụla n'ahịa, ọ dịkwa ọsọ karịa MacBook Air ugbu a.
Ugbu a, Laptọọpụ Elu ahụ na-agba ọsọ Windows 10 S, nke na-eme ka ngwa ngwa karịa ngwa Windows 10 ahụ, wee nwee ike ịnweta ngwa site Ụlọ Ahịa Windows. Na Windows 1O S i nwere ike na-agba ọsọ ngwa ndị Microsoft gosipụtara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị na-agba ọsọ ihe site na mpụga ụlọ ahịa ahụ, ọ ga-adị mkpa ịkwaga na Windows 10 Pro na nzukọ ahụ ga-enye ndị ahịa nhọrọ ahụ. Rịba ama, Windows 10 Pro weghaara ya ruo na December 31, 2017. Laptọọpụ Elu ahụ gbakwunyere otu afọ nke Office 365 Personal free.
Dabere na Microsoft, ngwa ndị ahụ na-egosi "nchekwa Microsoft na nkwenye." Nke a na-egosipụtakwa na ị gaghị ebudata ma wụnye Chrome ma ọ bụ Firefox na laptọọpụ ndị a, na Microsoft Edge bụ usoro mmezi.
Windows 10 S ejikọrọ aka na nkesa nchekwa nke nkesa, nke bụ OneDrive otú ahụ ka a ga-echekwa ihe ndekọ gị niile n'igwe ojii ma mepee site na ngwaọrụ dị iche iche.
Ya mere, olee nkọwa nke Laptọọpụ Larịị? Kedu ihe nkwụmalite maka ngwaọrụ ndị a?
Laptọọpụ Anya Microsoft ga-amalite na $ 999 wee gaa n'ebe dị anya na $ 2199 dabere na ụdị setup ị chọrọ maka ngwaọrụ a.
Ụdị i5 nke Intel na 128GB SSD na 4GB RAM n'akụkụ Intel HD Graphics 620 ga-efu $ 999. Ihe omuma a bara uru ga-abia na shading Platinum, dika ulo Microsoft. I5 Intel Core na 256GB SSD na 8GB RAM n'akụkụ Intel HD Graphics 620 ga-efu $ 1299 wee bịa na nke ọ bụla n'ime ihe anọ ọzọ nke shading nke bụ Burgundy, Platinum, Cobalt Blue, Graphite Gold.
Laptọọpụ Larịị na-agba ọsọ Windows 10 S, nke na-agbanye ngwa ngwa ka nchịkọta karịa Windows 10 omenala, ma nwee ike ịnweta ngwa sitere Ụlọ Ahịa Windows.
Mpaghara i7 Intel Intel na Intel Iris 640 na-amalite na $ 1599 maka 256GB SSD + 8GB RAM mmụgharị. Nke a na-abịa naanị na shading Platinum na mmefu $ 1,599. RN 16GB RAM + 512GB SSD, bụ nke a na-enweta na shading Platinum ga-efu $ 2,199.
Ugbu a, Laptọọpụ Elu ejiri 13.5-inch PixelSense Display, na 2256 x 1504 pixels mkpebi, nke na-arụ ọrụ na 201 PPI. Ihe ngosi 10 na-egosi bolsters multi-touch, ma nwee 3: 2 n'akuku nha anya na Ọnụ Ọdịdị Pen ga-apụnahụ na nke a.
Mpaghara igodo i7 nke Intel na Intel gosipụtara na $ 1599 maka 256GB SSD + 8GB Ram dị iche iche.
Ngwurugwu maka laptọọpụ elu a bụ 308.1 mm x 223.27 mm x 14.48 mm, ọ na-atụkwa 1.252 grams. Ọ nwere ọdụ USB 3.0 USB, ikpo okwu isi, Obere DisplayPort, Elu Jikọọ ọdụ ụgbọ mmiri, ma dị mma na Ịdị Elu na Elu Dock. Microsoft na-ekwe nkwa 14.5 awa nke ndụ batrị na laptọọpụ.
The Laptọọpụ Larịị na-esonye na Windows Ndewo ihu igwe na-abanye, igwefoto 720p HD (n'ihu ihu)
microphones. Ọ nwere okwu okwu Omnisonic na adịchaghị Dolby Audio. Na WiFi n'ihu, ọ nwere netwọk ịkparịta ụka Wi-Fi 802.11ac; IEEE 802.11a / b / g / n ọma na ọ na-agbakwunye Bluetooth 4.0 LE.
The Laptọọpụ dị njikere maka ndokwa na United States ugbu a, ma malite ịmalite site na June 15, 2017.